कसरी फोटोशप संग किनारहरु चिकनी गर्न क्रिएटिव अनलाइन
त्यहाँ डिजाइनरहरूका धेरै चालहरू छन् जुन उनीहरूले प्राप्त गर्ने नतिजालाई एमेच्योरले गर्ने कार्यसँग तुलना गर्न सकिदैन। यद्यपि, इन्टरनेटमा तपाईं ती मध्ये केही पाउन सक्नुहुन्छ जुन निर्देशनहरू अनुसरण गर्दै, गर्न सजिलो छ। उदाहरण को लागी, जब Photoshop संग किनारों महीन।
यदि तपाईं सँधै यो गर्न चाहानुहुन्छ तर कहिले थाहा छैन भने कसरी, हामी यहाँ जाँदैछौं तपाईंलाई के चरणहरू छन्, एक-एक गरेर व्याख्या गरिएको छ, ताकि तपाईं सच्चा विज्ञको जस्तो फोटोशपको किनारहरू सहज बनाउन सक्नुहुनेछ। त्यसोभए नतिजा धेरै राम्रो हुन्छ यदि तपाईंले गर्नुभएन भने।
1 को लागि धूम्रपान प्रभाव के हो?
2 कसरी Photoshop संग किनारहरु चिकना गर्न
2.1 फोटोशप र फाईल खोल्नुहोस्
2.2 फ्रेम उपकरण
2.3 चिल्लो बनाउन सुरु हुन्छ
2.4 कसरी फोटोशपको साथ किनारहरू सहज पार्ने: उल्टाउनुहोस्
2.5 मेट्नुहोस् लाई थिच्नुहोस्
3 किनारहरू फेड गर्नुहोस्
4 के त्यहाँ फोटोशपको साथ किनारहरू सहज पार्न अर्को तरीका छ?
को लागि धूम्रपान प्रभाव के हो?
धेरै जसो ग्राफिक डिजाइनरहरूले आफ्ना प्रोजेक्टहरूमा प्रयोग गर्ने संसाधनहरू मध्ये एक एन्टी-एलाइजिंग हो। यस प्रभावले के गर्दछ भन्ने छ कि छविको कुनाहरू हराउने छन्, बरु फीड प्रभाव छोड्ने, वा बादल जसले छविलाई नै आलिंगन गर्दछ।
किन यो प्रयोग भएको छ? ठीक छ, किनकि सौन्दर्य रूपमा यो धेरै राम्रो देखिन्छ; वास्तवमा, परिणामहरूले छविको अंशलाई अलग बनाउँदछ, ती जसमा तपाईं अधिक जोड दिन चाहानुहुन्छ, किन यो विशेष बिन्दुमा ध्यान केन्द्रित गर्न प्रयोग गरिन्छ। अब, यो आवश्यक छ कि यस छविले वस्तुलाई केन्द्रमा राख्दछ, किनकि, अन्यथा, प्रभावले फोटोको तीव्रता गुमाउन सक्छ, विशेष गरी यदि यसलाई कडा प्रभावको साथ प्रयोग गरिएको छ (नरमको सट्टामा)।
उदाहरण को लागी, कल्पना गर्नुहोस्, यदि तपाई वेब पेज बनाउँदै हुनुहुन्छ भने, कि तपाईले उत्पादको फोटो राख्नु पर्छ। यी उत्पादनहरू केन्द्रित, अण्डाकारहरूमा फोटोहरू राख्नुभयो भने यी धेरै उत्तम हुनेछ, यदि तपाईंले पृष्ठभूमिको साथ फोटोहरू राख्नुभयो भने जसको केही गर्नुपर्दैन, वा त्यो आयताकार हो, यस्तो देखिन्छ कि यो एकदम थोरै सावधानीका साथ गरिएको छ। डिजाइन मा।
फोटोशपको साथ किनारहरूमा धुवाँ उस्काउनु यो एक सजिलो कार्य हो जुन तपाईं यो व्यावसायिक छवि सम्पादकसँग गर्न सक्नुहुन्छ, र चरणहरू थोरै छन्। तर यदि तपाईंले यो कहिले गर्नुभएन, यसले तपाईंलाई अलिकता आदर दिन सक्छ। तसर्थ, हामी यहाँ चरणबद्ध रूपमा तपाईंलाई मार्गनिर्देशन गइरहेका छौं ताकि तपाईं यसलाई आफ्नो फोटो वा छविहरूको साथ गर्न सक्नुहुनेछ।
फोटोशप र फाईल खोल्नुहोस्
तपाईंले फोटोशपको साथ किनारहरू सहज बनाउनको लागि पहिलो कुरा भनेको प्रोग्राम खोल्नु हो र यसको साथमा, तपाईंले काम गर्न चाहानुभएको छवि खोल्नुहोस्। हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाईंको हार्ड ड्राइवमा तपाईसँग त्यो छवि छ किनकि त्यसले यति धेरै स्रोतहरू प्रयोग गर्दैन र तपाईमा त्रुटिहरू हुने सम्भावना कम हुन्छ, विशेष गरी यदि छवि अति भारी छ।
एकचोटि तपाईले यो खोल्नु भएपछि, हामी अर्को चरणमा जान्छौं।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बटनहरू मध्ये एक जब यो फोटोशपको साथ धुवाँको किनारहरूको लागि आउँदछ फ्रेम हो। यदि तपाईंसँग फोटोशप उपकरणपट्टी छ भने तपाईं यसलाई भेट्टाउनुहुनेछ। तपाईंलाई के चाहिन्छ त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई थिच्नुहोस् ताकि तपाईं आयताकार फ्रेम पाउनुहुनेछ। "चिकनी" शब्द शीर्षमा देखा पर्नेछ, त्यसैले तपाइँले चहवाइको दायरा संकेत गर्नुपर्दछ (यदि तपाइँ यसलाई थोरै वा धेरै चिल्लो बनाउन चाहनुहुन्छ भने)।
चिल्लो बनाउन सुरु हुन्छ
एउटा तस्विर नरम बनाउन को लागी, तपाइँ के गर्नुहुन्छ सानो आयतहरू बनाउनु हुन्छ, विशेष गरी छविहरूको कुनामा, ताकि ती फिक्याउन सकुन् र, यसको साथमा, यसको दृष्टि हराउँदछ (यो पारदर्शिताका साथ वा रंगसँग मिसाउँदछ। सेतो)।
एकचोटि तपाईंले गर्नुभयो भने, चिन्ता नलिनुहोस् यदि तपाईं डटेड रेखा आयतहरू पाउनुभयो भने, यो सामान्य हो (र के बाहिर आउनु पर्छ)।
कसरी फोटोशपको साथ किनारहरू सहज पार्ने: उल्टाउनुहोस्
एक पटक तपाईले सक्नु भएपछि तपाईले सेलेक्ट / इन्भर्टमा जानु पर्छ। यो किनभने हामी चयन मात्र तपाईलाई चाहानुहुन्छ मात्र प्रभावित गर्न चाहान्छौं सम्पूर्ण फोटोग्राफरमा होइन।
जब तपाईं यसलाई हिर्काउनुहुन्छ, कुनामा भाग डटेड रेखाहरू बीच रहनेछ।
तपाईंले पृष्ठभूमि रaसेतोमा सेट गर्नु आवश्यक छ (वा अर्को र color तपाईंसँगको फोटोमा आधारित छ र प्रभाव तपाईं यसलाईसँग सिर्जना गर्न चाहानुहुन्छ)।
मेट्नुहोस् लाई थिच्नुहोस्
केवल चरण बाँकी यसलाई मेट्नु हो ताकि अन्तिम परिणाम छोडिनेछ। अवश्य पनि, यदि तपाइँ यसलाई धेरै पटक मेटाउन दिनुहुन्छ भने तपाईं किनाराहरू मेटाउन जारी राख्नुहुनेछ जहाँ तपाईं चाहानुहुन्छ।
किनारहरू फेड गर्नुहोस्
फोटोको किनारहरू नरम पार्ने अर्को तरिका पनि छ, यद्यपि यसले तस्बिरलाई नै असर गर्न सक्दछ, विशेष गरी जब यसले व्यावहारिक रूपमा फोटोको पृष्ठभूमि मेटाउन सक्छ। यो किनारहरू फेडिंगको बारेमा हो।
यो गरियो, छवि खोलेको साथ, आफूले चाहेको छविको भाग छनौट गरेर (जुन तपाईं रहन चाहनुहुन्छ)।
अर्को, चयन थिच्नुहोस् / परिमार्जन / फेड।
त्यहाँ तपाईं एक फीका त्रिज्या देख्नुहुनेछ। यो ०.२ देखि २ 0,2० सम्म सेट गर्न सकिन्छ, तपाईं छवि कत्ति नरम चाहनुहुन्छ?
यदि तपाइँले देख्नुभयो भने, जब तपाइँ ओकेमा हिर्काउनुहुन्छ, के हुन्छ त्यो यो हो कि तपाइँ तत्काल हराउन चाहानुहुन्छ किनभने उपकरणले यसलाई गलत अर्थ लगाएको छ। त्यसको लागि, फेड थिच्नु भन्दा पहिले, चयन / उल्टो हिट गर्नुहोस्। तसर्थ, जब यो फेसिनको समय हुन्छ, यसले ती सबै चीजहरू हटाउँदछ जुन पहिले चयन गरिएको थिएन।
के त्यहाँ फोटोशपको साथ किनारहरू सहज पार्न अर्को तरीका छ?
सत्य यो हो कि त्यहाँ त्यहाँ अर्को तरिका छ, र त्यो फिल्टर र प्रभावहरूसँग खेल्नु हो जुन कार्यक्रमसँग छ। उदाहरण को लागी, कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईसँग एउटा फोटो छ जसमा तपाईसँग एक व्यक्तिको छवि छ (पशु, वस्तु, आदि) र तपाइँ तपाइँको ध्यान त्यसमा केन्द्रित गर्न चाहानुहुन्छ।
त्यसकारण, तपाई चाहानुहुन्छ कि बाँकी सबै छविहरू धमिलो देखिनुहोस् वा केवल देखा पर्दैन। यो गर्नका लागि हामी तपाईंलाई फिल्टर / लाइटमा जान सिफारिस गर्दछौं। किन त्यहाँ? धेरै कारणका लागि:
बत्तीको साथ तपाई छायाँ सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ जसले छविलाई केवल त्यस भागमा मात्र उज्यालो प्राप्त गर्दछ जुन तपाईंलाई चासो लाग्दछ। साथै, यो अँध्यारो पृष्ठभूमि हुनुपर्दैन, जहाँ तपाईं बत्तीहरू राख्नुहुन्छ, यसका आधारमा तपाईं कन्ट्रास्टको साथ खेल्न सक्नुहुनेछ।
तपाईंसँग अधिक मौलिक प्रभाव हुनेछ। र फोटोशपको साथ किनारहरू नरम तुल्याउन ठीक छ, तर ती समस्याहरू हुन् जब ती फोटोहरूको पृष्ठभूमि हुन्छ र त्यो हो, यदि तपाईं यसलाई राम्रोसँग गर्नुहुन्न भने, यो एकदम अचानक काटिन सकिन्छ।
तपाईले फोटोग्राफीलाई "रहस्यमय" छुनुहोस्।
जब प्रकाशको बिभिन्न बिमहरू हेर्नको लागि आउँदछ, हामी तपाईंलाई सिफारिश गर्दछौं कि तपाईले सबैलाई हेर्नुहोस कि तपाईले खोज्नु भएको परिणामका लागि सबैभन्दा उपयुक्त के हो। थप रूपमा, तपाई प्रकाशको गहनता, अभिमुखीकरण र तपाईले पाउनु हुने प्रभाव परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ (किनकि तपाईं मानहरू परिमार्जन गर्न सक्नुहुनेछ)।
यो किनारहरू राम्रोसँग मिल्दैन, तर अधिक प्रकाशको त्रिज्या खोलेर, तपाईं आफूले खोजिरहनु भएको प्रभाव प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र, कहिलेकाँही, यसलाई पहिले यो भन्दा पहिले बताईएको भन्दा सजिलो हुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » ट्यूटोरियलहरू » कसरी Photoshop संग किनारहरु चिकना गर्न
JPG बाट वर्डमा कसरी जाने